Shirka Golaha Wasiirada oo looga hadlay arrimo kala duwan – Balcad.com Teyteyleey
Howlgallada xasilinta amniga iyo howlgalka militariga ayaa si wanaagsan u socda dalka. Deegaanka Kuunyo-Barrow ee Jubbaland ayaa12kii ilaa iyo 15kii July lagu dilay ilaa 90 maleeshiyaadka argagaxisda ah.
Wasiirka Gargaarka & Maareynta Masiibooyinka ayaa ka warbixisey safar shaqo oo ay ku tagtey Roma iyo Geneva oo ay sheegtay in labada shirba ay muhiim u ahaayeen dalka Soomaaliya. Wasaarada Gargaarka ayaa waday wadatashi lagu diyaarinayey siyaasadda gargaarka oo si fiican u qabsoomay.
Sidoo kale Wasaaradu waxey soo bandhigtay waxqabadkii wasaaradda oo iyadoo kaashaneysa hay’adaha gargaarka lagu guuleystay in la xakameeyo in dalka macluul ka dilaacdo iyo ka hortag laga sameeyey faafka cudurada dilaaga ah, welina waxaa la wadaa dadaal weyn.
Ciidamo qabsaday Saldhiga Booliska Magaalada Baladweyne.
Somali Presidential Secretary is Suspended Over Power Struggle – Reports